ပို့ဆောင်ခြင်း - နောက်တစ်ခု ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်
NextsChain သည် Worldwide Shipping ကိုပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် 300+ Carriers များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှာစာ ဖြန့်ဝေမှု လုပ်ငန်းစဉ်
NextsChian Shipping ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
1. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း 300+ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Shopify ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ dropshipping လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် မြန်ဆန်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပို့ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။အမေရိကန်တင်မကဘူး။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ခိုင်မာသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံစနစ်အပေါ်အခြေခံ၍ NextsChain သည် NextsChain မှ ပါဆယ်အပြည့်ဖြည့်သွင်းမှုအတွက် ခြေရာခံအချက်အလက်နေ့စဉ်အပ်ဒိတ်ကို ပေးပါသည်။၎င်းသည် Shopify ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ပါဆယ်ထုပ်များကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အမှာစာတိုင်းကို အချိန်မီ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပါဆယ်များနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
3. NextsChain သည် ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ပါဆယ်ထုပ်များကို စောစီးစွာ လက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် Black Friday နှင့် Christmas ကဲ့သို့ အထွတ်အထိပ်ရာသီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိဉာဏ်ရှိသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်အပေါ် ကယ်ရီယာအခြေခံကို ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။
4. ၎င်းသည် စီးပွားရေးစာတိုက်ပါဆယ်ထုပ်၊ အမြန်အမြန် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် သင်္ဘောမည်မျှပင်ရှိပါစေ NextsChain သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၇ ရက်မှ ၁၁ ရက် *
အလုပ်ချိန် 8 မှ 12 ရက်*
အလုပ်ချိန်6– 8 ရက်*
အလုပ်ချိန် ၈ မှ ၁၀ ရက်*
3 –5ရုံးဖွင့်ရက် *
၅ ရက်မှ ၈ ရက် *
အလုပ်ချိန်6– 10 ရက်*
အလုပ်ချိန်7မှ 10 ရက်*
၁၄ ရက်မှ ၂၂ ရက် *
15 – 25 လုပ်ငန်းရက်များ*
စာရင်းသွင်းထားသော ဖြတ်သန်းချိန်သည် ၂ ရက်အထိ လုပ်ဆောင်ချိန် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အားလပ်ရက်များ အပါအဝင်) မပါဝင်ပါ။
ပို့ဆောင်သည့်အချိန်ကို ခန့်မှန်းထားပြီး မှာယူသည့်နေ့ထက်၊ ပို့ဆောင်သည့်နေ့မှစတင်ကာ မှားယွင်းနေသောလိပ်စာ၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းများကြောင့် မျှော်လင့်ထားသည့်ရက်ထက် ပိုကြာနိုင်သည်။
COVID-19 ကြောင့် ရောက်ရှိချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေ ၁၅-၄၅ ရက်ဖြစ်သည်။